Wararkii u dambeeyay qarax lala eegtay Ciidamo ka tirsan dowladda | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Wararkii u dambeeyay qarax lala eegtay Ciidamo ka tirsan dowladda
Wararkii u dambeeyay qarax lala eegtay Ciidamo ka tirsan dowladda
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo duleedka degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha dhexe lagula eegtay Gaadiid ay la socdeen ciidamo ka tirsan Millateriga Soomaaliya,waxaana la sheegay inay ka dhasheen khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Qaraxa koowaad ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka lagu Magacaabo Gololeey oo u dhaxeeya wadada xiriirisa Balcad iyo Qalimow,waxaana lala eegtay Gaari nooca Soomaalida u taqaano qooqanta oo uu leeyahay taliyaha Ururka 57aad ee Guutada 1aad ee Millateriga Soomaaliya kaas oo lagu Magacaabo Cali Xuubeey.
Qaraxa labaad ayaa yimid kadib markii Gaari Cabdi Bile ah oo ka tegay degmada Balcad gurmadna ahaa lala eegtay,hayeeshee goobjoogayaal ay sheegeen in uusan geysan wax khasaaro ah,iyada oo qaraxyada kadib ciidamada ay rideen rasaas farabadan taas oo aan geysan wax khasaaro ah.
Gaariga Koowaad ee qaraxa lala eegtay ayaa ka tegay saldhig Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin meel u dhow Tuulada gololeey oo lagu Magacaabo Haansheekh,isla markaana uu kusii jeeday Koontoroolka Ceelka Goolow oo dhawaan la geeyay Ciidamo ka tirsan Millateriga Soomaaliya.
Askartii ku dhaawacantay qaraxaas ayaa waxaa la geeyay degmada Balcad si loogu daweeyo,waxaana wararku sheegayaan in Ciidamada Millateriga Soomaaliya ay howlgal ka sameeyeen inta u dhaxeysa degmada Balcad iyo deegaanka Qalimoow ee wadada xiriira Balcad iyo Jowhar ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Mas’uuliyiinta Maamulka degmada Balcad iyo Saraakiisha Ciidamada Millateriga weli kama hadlin qaraxaas,hayeeshee waxaa xusid mudan in wadada xiriira Balcad iyo jowhar ay dhowr mar Al-Shabaab ka geysteen qaraxyo iyo weeraro toos ah wallow todobaadyadii la soo dhaafay uu amnigeedu soo hagaagayay.
Previous articleFarmaajo oo Magacaaabay danjiraha Sacuudiga una yeeray kuwo kale
Next articleShaqsi loo qabtay dilkii Gaalkacyo loo geystay Nimco Cumar